Global Tourism Resilience Center yakazvipira kugadzirisa Haiti Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Haiti Kuputsa Nhau » Global Tourism Resilience Center yakazvipira kugadzirisa Haiti Tourism
Haiti Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Kutsigira kweHaiti kushanya kwekudzokorodza
Mumusangano wekutanga wakaitwa nhasi, nhengo dzepamusoro-soro Tourism Resilience, Recovery uye Sustainability taskforce vakavimbisa rutsigiro rwavo rwakazara kuti vape rubatsiro kuHaiti yadengenyeka. Gurukota rezveKushanya pamwe nemubatsiri weGlobal Tourism Resilience uye Crisis Management Center (GTRCMC), Hon. Edmund Bartlett, anoti danho iri rinosimbisa kuzvipira kukurumidza kugadzirisa uye kusimba kwechigadzirwa cheHaiti chekushanya.
Pamusangano, zvimwe zvezvinodiwa nekukurumidza zvevanhu veHaiti uye zvinonyanya kukosha kugadzira matrix ekutsigira kuunganidzwa uye kugoverwa kwezvinhu izvi zvakakurukurwa.
Vashandi vekambani vakatsanangura nhanho dzinotevera dzinosanganisira iyo GTRCMC kurongedza zvese zvinhu zvekuedza kugadzirisa.
GTRCMC ichashanda zvakare nevabatanidzi vezvekushanya pasirese kutsigira Haiti.
"Ndiri kufara kuti kusangana kwezviitiko uye hunyanzvi hwevashandi vepamusoro vachakwanisa kutanga kuisa masisitimu nemaitiro anodikanwa kubatsira vanhu veHaiti kutanga nzira yavo yekupora. Kubva pamusangano wanhasi, takwanisa kukurukura zvimwe zvinodiwa nevanhu vekuHaiti nekukosha tichigadzira matrix ekutsigira kuunganidzwa nekugoverwa kwezvinhu izvi, "vakadaro Gurukota Bartlett.
Vashandi vekambani vakatsanangura nhanho dzinotevera dzinosanganisira Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center kurongedza zvinhu zvese zvekuedza kugadzirisa; kushanda nevatambi vezvekushanya pasi rose ku tsigira Haiti; kuumbwa kwema subcommittee ekugadzirisa zvakasiyana zvinhu zvekushanya kwekushanyirwa; kupihwa rutsigiro rwehunyanzvi uye hwekushandisa.
“Ndiri kunyaradzwa nerutsigiro rukuru ruri kupihwa nenhengo dzevashandi. Isu tinonzwa mweya wehukama neHaiti tichipihwa padhuze. Isu tiri chikamu cheiyo jogirafi yakazara nekuti izvo zvinozvikanganisa zvinotikanganisawo, ”vakawedzera Gurukota Bartlett.
Vashandi vacho vakabvumiranawo kuti kuchave nekubatana kwekutaurirana; kuongorora uye kuongorora; kuunganidza zviwanikwa uye manejimendi; uye kushanya kwekushinga.
Mukuratidza kukosha kwe Kudzoreredza kwekushanya kweHaiti, Executive Director veGTRCMC vakati, "Covid aratidza kukosha kukuru kwekushanya kune hupfumi hwenyika, nekudaro kudzoreredza kwekushanya kweHaiti kuchakosha kune ramangwana reHaiti, uye tinofanira kutora matanho nekukurumidza."
Taskforce, iyo yakarongerwa kusangana zvakare svondo rinouya, yakawedzera Vachigaro weMutungamiriri weCaribbean Hotel uye Yevashanyi Association (CHTA), Nicola Madden-Grieg uye wepasi rose investor uye muzvinabhizimusi, Morten Lund.